Soomaaliya waa inay diido IMF & World Bank Deynta Cafinta Halkan ka arkhriso Sababta – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Soomaaliya waa inay diido IMF & World Bank Deynta Cafinta Halkan ka...
Soomaaliya waa inay diido IMF & World Bank Deynta Cafinta Halkan ka arkhriso Sababta
Toddobaadkii la soo dhaafay, Bangiga Adduunka iyo Hay’adda Lacagta Adduunka (IMF) waxay ku dhawaaqeen in labada hay’adood ay ku dhowaanayaan inay u fidiyaan Soomaaliya deyn deyn ah oo gaareysa 5.3 bilyan oo doollar oo u dhiganta KES530 bilyan oo hoos timaadda dadaallada Heerka Saboolnimada daran ee Waddammada (HIPC) kaas oo ah istiraatiijiyad IMF oo ah sii hormarinta barnaamijyadeeda Is-waafajinta Dhismooyinka (SAPs).
In kasta oo ay kujirto qiimaha wajiga, Deymaha Deynta Soomaaliya ayaa u muuqda kuwa wanaagsan, gadaal ka daawo muuqaalka, Bangiga Adduunka iyo IMF waxay soo bandhigeen fowdo sumeysan oo horseed u noqon doonta waddanka Bariga Afrika gumeysiga badan iyadoo la adeegsanayo deymo. Dadaalka gurmadka deynta ayaa ka bilaabmay shirkii 1988 ee Toronto G7 halkaas oo la isku raacay in boqolkiiba 33 kaalmada aan ahayn dibedda loosoo gaabiyo (ODA) in loo kansali doono wadamada saboolka ah. Heerka ilaa iyo waqtigaas dib ayaa loo cusboonaysiiyay. Talaabadan ayaa la timid shuruudo adag oo xaddidan sidaa darteed ma xallin dhibaatada deynta. Markii ay culeys kala kulmeen dadka u ololeeya deynta, ayaa lacag-bixiyeyaasha caalamiga ah ee 1996, waxay la yimaadeen dadaal kale oo deyn deyn ah; HIPC oo la xoojiyay sanadkii 1999. Muhiimadu waxay ahayd ku lug lahaanshaha Baanka Adduunka iyo IMF oo 1986 iska caabiyey kaalmada deynta iyaga oo sheeganaya in qaynuunnadooda ka mamnuuceen bixinta deynta deynta ah. Maxay tahay sababta loo beddelayo mowqifka IMF iyo Bangiga Adduunka?
IMF iyo Bangiga Adduunka waxay soo bandhigayeen waji gabax markii ay beddeleen mowqifkooda ku aaddan bixinta deynta laakiin arrinta dhabta ah ee ku kaliftay inay qaataan qaadashada gargaarka deynta ayaa ah cabsida dhimashada ee deynta inay sababi karto nidaamka maaliyadeed ee adduunka oo dhan inuu burburo. HIPC sidaa darteed ma aha aalad lagu yareeyo culayska deynta ee wadamada saboolka ah sida Soomaaliya laakiin waa istiraatiijiyad lagu sameeyo deynta dibedda ee wadamadaas sii waarta iyada oo waxyar yareynaysa deymaha lagu leeyahay wadamada saboolka ah si loo joojiyo bixinta dambe, dib u bixinta iyo ama dalabka dib-u-habeynta deynta ee wadamada aan awoodin inay dib u bixiyaan deynta.
Si looga faa’iideysto barnaamijka HIPC, waddan waa inuu marka hore la saxiixdo IMF heshiis la xiriira siyaasad dhaqaale oo ay ansaxisay Washington caan ku ah Warqadda Istaraatijiyadda Yaraynta Saboolnimada (PRSP) muddo saddex sano ah. Tani waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay si hufan ugu wareejin doonto madaxbanaanideeda IMF iyo Bangiga Adduunka maadaama ay horseedi doonto in si gaar ah loogu wareejiyo kheyraadka iyo badeecadaha Soomaaliya, lagana boobo kheyraadka dabiiciga ah ee Soomaaliya iyada oo loo maleynayo inay hubineyso in Soomaaliya ay soo saari karto kheyraad ku filan oo ay ku bixin karto deyn kastoo mustaqbalka ah.
Soomaaliya waa in ay diido qorshaha HIPC oo ay taa bedelkeeda deysaa dhamaan deymaheeda isla markaana ay xoogga saartaa sidii ay ugu maal gashan lahayeen adeegyadooda dadweynaha. Soomaaliya waxay leedahay dhammaan sababihii lagu diidi lahaa bixinta deynta haddii waxqabadka hore ee HIPC ay tahay wax laga gudbi karo. Hay’ada Lacagta Adduunka ee IMF iyo Bangiga Aduunka ayaan ka walaacsaneyn saamaynta xun ee ay ku yeelatay SAP-yada muwaadiniinta Soomaaliyeed.
In kasta oo ujeeddada asalka ah ee HIPC ay ahayd in la damaanad qaado xuquuqda aasaasiga ah ee aadanaha, ciribtirka saboolnimada iyo u suurta gelinta muwaadiniinta waddamada daneeya madaxbanaanidooda arrimaha, xaqiiqada ka jirta dhulka marka la eego waaya-aragnimada wadamada ku soo biirey barnaamijka HIPC way ka duwan yihiin tan iyo markii howsha la bilaabay. Ujeeddada dhabta ahi waa in loo suurtogeliyo waddamada faqiirka ah inay dib ubixiyaan deymaha si joogto ah iyo ugu badnaan awoodooda dhaqaale. Sidaa darteed waa la tirtiraa deymaha oo uusan dalku dib u bixin karin heer aysan waddamada liita sida Soomaaliya oo kale joojin karin bixinta. Waxay ku saabsan tahay deynta inay sii waarto si loo hubiyo in deyn bixiyeyaasha ay hubiyaan inay helayaan dib-u-bixinta iyada oo aan halista halista degdega ah looga bixin deynta.
Sidaa daraadeed HipC ma ahan danta muwadiniinta Soomaaliyeed ee waa danta deyn bixiyeyaasha maadaama SAP ay weheliso barnaamijka HIPC ay si weyn hoos ugu dhigi doonto qarashka bulshada ee dowladda Soomaaliya, hoos u dhigeyso lacagta Soomaaliya, waxay kordhineysaa heerka dulsaarka ee Soomaaliya, horumarinta dhoofinta jihaynta dhoofinta dhaqaalaha waxsoosaarka, furitaanka suuqa buuxa ee Soomaaliya iyadoo la tirtirayo caqabadaha caado, xorriyadda dhaqaalaha Soomaaliya iyadoo la tirtirayo dhammaan kontaroolada dhaqdhaqaaqa caasimadda iyo xakamaynta is-weydaarsiga, nidaam canshuureed oo ka jira Soomaaliya oo sii xumeeya sinnaan-la’aanta, gaar-u-yeelashada hantida guud iyo dib-ula-noqoshada dowladnimada Soomaaliya. laga bilaabo qaybaha tartanka ee wax soo saarka. Tani waxay ka soo horjeedaa hindisaha HIPC ee ah himilo u gaar ah dammaanad qaadka xuquuqda aadanaha ee aasaasiga ah, ciribtirka saboolnimada iyo u suurta gelinta muwaadiniinta Soomaaliyeed inay yeeshaan awood madaxbanaanida arrimahooda.